Toddoba Riyood Waxbarshada Waxbarashada - Dugsiyada Aagga Robbinsdale
Toddoba Riyood Waxbarashada Aasaaska (SDEF) waxay u heellan tahay inay ka caawiso ardayda Dugsiyada Robbinsdale Area inay ku guuleystaan iyagoo maalgeliya dadaallada waxbarasho ee hal abuurka leh ee kor u qaadaya xirfadaha iyo khibradaha shaqsiyeed.
Toddobada Riyood ee Waxbarashada waa aasaas madax-bannaan, oo aan faa'iido doon ahayn 501 (c) (3) aasaas waxbarasho oo ay aasaaseen xubnaha bulshada, waalidiinta iyo xirfadlayaasha waxbarashada ee Dugsiyada Deegaanka Robbinsdale. Laga soo bilaabo aasaaskii SDEF ee 2003, Aasaasku wuxuu ururiyay in kabadan $ 900,000 oo tabarucaad ah waxayna maal galisay 225 deeqo si loogu taageero guusha ardayga loona kordhiyo awooda shaqsiyadeed ee tacliimeed. In kabadan $ 50,000 ayaa loo aruuriyay qalabkeena 4 ololaha caruurta 300 qalab ayaa la soo ururiyay si loogu amaahdo ardayda leh awood yar.
Toddoba Website Riyooyin
Toddoba Riyood Waxbarashada Aasaaska waxay dhiirrigelisaa oo ay fulisaa riyada waxbarashada iyo waaya-aragnimada dhammaan ardayda wax ka barata Dugsiyada Aagga Robbinsdale.
Waxaan isu keeneynaa bulshadeena, barayaasha, waalidiinta, ganacsiyada iyo hogaamiyaasha bulshada si aan u sugno siyaabo iyo macnaho loogu talagalay dhiirigelinta iyo ka qeyb qaadashada dhammaan ardayda wax ka barata Dugsiyada Aagga Robbinsdale.
"Toddobada" magaceena ayaa matalaya toddobada beelood ee Degmadda Dugsiga Aagga Robbinsdale: Brooklyn Center, Brooklyn Park, Crystal, Golden Valley, New Hope, Plymouth iyo Robbinsdale.